माओवादीद्वारा राष्ट्रपतिको सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गर्न प्रस्ताव, राजनीतिमा ल्यायो नयाँ तरंग – Enepali Samchar
माओवादीद्वारा राष्ट्रपतिको सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गर्न प्रस्ताव, राजनीतिमा ल्यायो नयाँ तरंग
March 17, 2021 adminLeaveaComment on माओवादीद्वारा राष्ट्रपतिको सर्वदलीय बैठक बहिस्कार गर्न प्रस्ताव, राजनीतिमा ल्यायो नयाँ तरंग
e nepakischar/ काठमाडौं, चैत । नेकपा (माओवादी) केन्द्रले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा बोलाइएको सर्वदलीय बैठक बहिष्कारका लागि प्रस्ताव गरेको छ । संसद विघटन गर्दा एकैछिनमा संसद भङ्ग गर्ने आदेश जारी गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीलाई अहिले बेलान कुबेला सर्वदलीय बैठक किन चाहियो भनेर माओवादीले प्रश्न गरेको छ । माओवादीका एकजना नेताले सबै दलहरूलाई बैठक बहिस्कारका लागि आह्वान गरेका छन् ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै माओवादीका नेता हरिबोल गजुरेलले राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा बोलाइएको सर्वदलीय बैठक बहिस्कारका लागि प्रस्ताव गरे ।
राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुको कुनै अर्थ नरहेको नेता गजुरेलले बताएका छन् । आफ्नो मर्यादामा बस्न नसक्ने राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गर्ने बेला किन सर्वदलीय बैठक नबोलाएको भनेर गजुरेलले प्रश्न गरेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिले किन सर्वदलीय बैठक बोलाउने ? बहिष्कार गर्नुपर्छ । अध्यादेश ल्याउँदा सल्लाह नगर्ने । आफ्नो हैसियत कायम गर्न सक्नुभएको छैन’, माओवादीका नेता गजुरेलले भनेका छन् ।
‘संसद विघटन गर्न खुरुखुरु गर्ने । जति बेला सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने बोलाउनुभएन । अहिले बोलाउने ?’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘उहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति हो । त्यो कायम गर्नुभएन । डा.रामवरण यादवले जति पनि काम गर्न सक्नुभएन ।’
माओवादी नेता गजुरेलले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सर्वदलीय बैठकको औचित्य छैन । सबै मिलेर बहिस्कार गरौँ ।’ राष्ट्रपति भण्डारीले मंगबार चार बजे सर्वदलीय बैठक बोलाएकी छिन् । उनले के विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएकी हुन् केही भनेकी छैनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिनुका साथै तत्कालीन नेकपाको राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेको भनेर भण्डारीको कडा आलोचना हुँदै आएको छ । भण्डारीले बेलाबेला नेकपाका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गर्ने गरेपछि आफ्नै पार्टीका नेताहरूले आलोचना गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको आरोप छ । संसद विघटन गर्नुभन्दा अगाडि राष्ट्रपति भण्डारीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरेकोमा दलका नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् । बंगलादेशको चैत ९ र १० गते भ्रमण गर्न लागेकी राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा पर्ने गरेकी छिन् ।
लेडिज पकेटमारको कुरा सुनेर प्रहरी पनि हैरान : दैनिक ५० हजार आमदानी, चोरेरै गोंगबुमा घर !
अब पुरानो रेडियो-टिभीमा भएको रेड मर्करीलाइ बिक्रि गरि लाखौ कमाउन सकिने :पुरानो रेडियो-टिभी खोज्नेहरू बढे…